Duulimaadyada Waqooyiga Kuuriya oo Arkay Cathay Pacific Airline’ | Raadgoob
Duulimaadyada Waqooyiga Kuuriya oo Arkay Cathay Pacific Airline’
Diyaaradda saarnaa diyaarad Cathay Pacific ah oo duulimaad ka socota Japan ayaa soo saartay aragti la tuhunsan yahay in tijaabadii missiles ee todobaadkii hore ee waqooyiga Kuuriya, sida ay sheegtay shirkadda duulimaadka.
Shirkadda ayaa xaqiijisay BBC-da in shaqaalihii markhaatiga ay arkeen “waxa looga shakiyay in ay noqdaan dib-u-soo-gal” ee gantaalaha u galay jawiga dhulka.
Wuxuu intaa ku daray in arrimuhu aysan istaagi karin dariiqyada duulimaadyada la bedelay.
29kii Nofeembar ee Waqooyiga Kuuriya ayaa tijaabiyay gantaal balaadhan oo dhexdhexaad ah oo la yiraahdo in ay gaari karto meel kasta oo Maraykanka ah.
Tijaabinta bilawga ah ayaa sii kordhisay xiisadda dheeriga ah ee Kuuriyada Koonfureed iyo Mareykanka, oo Isniintii bilaabay jimicsiga hawada ee ugu ballaadhan, oo waqooyiga u calaamadiyay “kacdoon ka dhan ah”.
‘Iska dhufo oo kala daataan’Qeexitaanka Pyongyang oo ah “ugu awoodda badan” gantaalaha, 29kii Nofembar ayaa billowday dhammaadkii biyaha Japan, laakiin waxay ka duuleen meelo kale oo Waqooyi hore u baaray.
Sida laga soo xigtay Koonfurta Shiinaha Subax, maareeyaha Guud ee shirkadda Cathay Mark Hoey ayaa u sheegay shaqaalaha in fariin qoraal ah oo ku saabsan in maanta shaqaalaha Markabka CX893 ay sheegeen,
Bilawga ayaa la sheegay in ay sidoo kale goobjoog ka ahaayeen laba diyaaradood oo Koonfurta Kuuriya ah oo u socdaalay Seoul oo ka yimid Maraykanka.